Apple nitory tany Sina noho ny fanaovana dokambarotra diso | Vaovao IPhone
Tsy ity no voalohany ary tsy izany koa ny fitoriana farany hatolotra an'i Apple. Ny iray farany dia natolotry ny mpisolovava sinoa iray milaza fa dokambarotra mamitaka. Ary, rehefa mankany amin'ny Apple Store an-tserasera isika dia afaka mamaky ilay andianteny «ny zavatra hany miova dia ny zava-drehetra»Misy zavatra atokisan'ilay mpisolovava, antsoina hoe He Ganlin, fa diso tanteraka. Araka ny nambarany, ny iPhone 6s «tsy manana zava-baovao»Raha ampitahaina amin'ny maodelin'ny taranaka teo aloha, ny iPhone 6.
Nanaiky ny raharaha ny fitsarana iray any Canton, faritany atsimon'ny Sinoa nonenan'i He Ganlin. Nanambara ny mpisolovava fa ny teny "tokana" sy "rehetra" dia manitsakitsaka ny lalàna vaovao momba ny dokambarotra sinoa, a lalàna mandrara ny fampidirana ny teny feno amin'ny doka toy ny "tsara indrindra" na "tonga lafatra." Ny tena tsy mazava dia ny handresy ny raharaha izy, satria i Apple dia nikasa ny hanaraka ny lalàn'ny firenena rehetra, indrindra ny Sina, izay firenena nampitombo azy ireo indrindra tao anatin'ny roa taona.
Mikasika izay antenain'ilay mpisolovava sinoa ho azo dia mangataka amin'ireo any Cupertino 20.000 yuan i He Ganlin, izany hoe intelo heny noho ny vidiny nividianany iPhone, 6.858 yuan, zavatra iray izay tsy mazava koa, satria raha izany antenainao ny fanangonana fahasimbana, ny vidin'ny iPhone sy ny vidiny vokarin'ny fividianana fotsiny no angatahinao, toy ny lasantsy, ny vidin'ny fandefasana sy ny sisa. Raha manontany dia tsy izany. Raha toa ka nanao fanarahan-dalàna i Apple dia ho nanohitra ny lalàna vaovaon'i Shina izany, saingy tsy mpisolovava aho.
Mbola tsy naneho hevitra i Apple fa mila mitandrina kosa ianao amin'ny famahana ity raharaha ity. Na inona na inona fanapahan-kevitrao, dia aza avela hahatsapa ho voafitaka amin'ny fomba rehetra ny Sinoa, izay mety hahatonga ny orinasa tarihin'i Tim Cook ho very ny tany azony tany Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple nitory tany Sina noho ny fanaovana dokam-barotra diso
Jman dia hoy izy:
Angatahana ny fandoavana ny fahasimbana ara-pitondrantena. Tsy azo zahana. Raha tsy mpisolovava ianao dia tokony hitsahatra tsy hanome ny hevitrao
Valiny tamin'i Jman
Salama, Jman. Tsy mpisolovava aho, saingy efa nandalo fitsapana maro. Ny fahasimbana ara-pitondrantena ... holazaiko anao ny zavatra, fa tsara kokoa noho ny tsy. Afaka miteny amin'izay hitako aho, izay tsy kely. Na eo aza izany dia soratako tsara fa "tsy mazava koa", izay tsy hevitra, raha tsy hanehoana ny tsy fahalalana.
ase dia hoy izy:
Fahasimbana tsy ara-bola ... azonao atao ny mahita fa ianao no mpisolovava mampidi-doza mahazatra izay ampiasain'ny olona ratsy indrindra hahazoana vola na dia voalavo aza ... Io no tranga mahazatra an'ilay adala miasa izay manantena ny hahazo ny iPhone-ny afaka. Raha tsy tianao izany na tsy mifanaraka dia averinao io, io no ilana ny politika fiverenan'ny Apple. Tsy hitako fa mitory ny olona rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra antenainy na lazainy ny TV, Avereno ao amin'ny magazay izany ary avereno ny volany ARY POINTO. Miaraka amin'ny mpisolovava maro toa anao, izany no mahatonga ny isan'ny olona toy izany. Manome soa ve ny fiaraha-monina ka mitsambikina avy eo am-baravarankely hatramin'ny rihana fahefatra ka tsy ho tafavoaka velona ianao
Mamaly an'i ase
ivanhoe926 dia hoy izy:
Pablo, tsy tiako ny hiankina aminao amin'ny raharaha rehetra. Raha tsy manan-javatra holazaina ianao ... mila milaza izany ve aho?
Mamaly an'i ivanhoe926
pablojds dia hoy izy:
Jman, tsy haiko raha ho mpisolovava ianao na tsia, tsapako fa raha avy amin'ny hevitrao, amin'ny antony marobe dia tokony ho fantatrao hoe inona ny FREEDOM OF EXPRESSION ... mahamenatra ny fanehoan-kevitra toa an'io ity pejy ity ary mamela ihany koa eo anelanelan'ny milaza hoe "ny fahalalanao avo amin'ny lalàna." Mirary ny soa indrindra.
Miarahaba an'i Pablo, mamaky ny hafatrao isan'andro aho, triatra ianao
Mamaly an'i pablojds
Withings dia manolotra ny Activité Steel vaovao